Lupine. Uthotho kunye neencwadi malunga nesela elidumileyo likaMaurice Leblanc | Uncwadi lwangoku
Lupine. Uthotho kunye neencwadi malunga nesela elidumileyo likaMaurice Leblanc
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi, Izaziso, Inoveli, Inoveli emnyama, Ezahlukeneyo
UArsene Lupine, edumileyo nebukekayo isela iglavu emhlophe eyenziwe ngumbhali ongumFrentshi UMaurice Leblanc, ibuyiselwe umva Imfashini. Okanye mhlawumbi bekusoloko kunjalo, ngakumbi kwilizwe leGallic, apho engomnye wabalinganiswa abaziwayo boncwadi. Kwakungenxa yokuba lupine, kwisithunzi sika-Arsène, Efundwa njengombhalo ongezantsi ophumeleleyo Imdidlalo eqhubayo yeTV esanda kukhutshwa. Umdlali weqonga odumileyo waseFrance Omar Sy, kunye nomfanekiso wakhe kunye neencwadi ngasemva, sisizathu sokwenza i uphononongo.
1 UMaurice Leblanc
2 UArsène Lupine, umkhonto kunye nesela
3 Ubalo lweCagliostro kunye nenaliti engenanto
5 Ezinye izihloko kunye neLupine
5.2 Ulwaphulo-mthetho lwaseFrance: i-anthology
5.3 USherlock, uLupine, kunye nam: iBlack Lady Threesome
U-Leblanc wazalelwa e URuan en 1864 Waqala umsebenzi wakhe wokubhala eParis. Vula 1905 wadala uArsène Lupine, umlingisi ogqibe ukuba ngomnye wabona badumileyo kuncwadi lwabacuphi.
I-Lupine lisela elinekhola emhlophe elinenkcubeko, elinobuhle kwaye elikhohlisayo eliba kubantu ababi kakhulu kunalo. Star kwezinye iinoveli namabali angamashumi amabini. Uninzi luthatha uLupine kunye namabali akhe njenge Inguqulelo yesiFrentshi ye USherlock Holmes. Ngapha koko, unyaka nje omnye emva kokudalwa kweLupine, uLeblanc wabhala uthotho iimbali apho yadibanisa abalinganiswa ababini, nangona IHolmes yayinguHerlock Sholmes.
UArsène Lupine, umkhonto kunye nesela
La kuqala Ibali likaLupin lithathwa njengesiqwengana soncwadi lwempuphu. Umzekelo wayo wokuqala wawuloluhlu amabali apapashwe kwiphephancwadi NdinguSaout, eya kuthi kamva ipapashwe kunye nesi sihloko. Yincwadi yokuqala leyo unika utata wakhe umlinganiswa ophambili kuthotho yeTV. Ikwaqulathe ibali Umqala weKumkanikazi, eyinxalenye yesiqwenga sesahluko sokuqala kolu ngcelele.
Ubalo lweCagliostro kunye nenaliti engenanto
Ezi zihloko zikhankanyiwe kolu ngcelele. Eyokuqala iqulethe i into emnandi nangaphezulu kwendalo ebekwe nguLeblanc kumabali eLupine. Apha, umzekelo, isela lijongene ne-heiress yeDuke yaseCagliostro, ububi obungenakufa kunye nokubhalwa kukaNjingalwazi waseHolmese uMoriarty.
lupine - ISerie
Kuluhlu oluvelisa Netflix umfanekiso weLupine kwaye ezo ncwadi zi imvelaphi kwaye ngabo Ukuphefumlelwa yomntu ophambili, Assane diop (Omar Sy). UDiop yindoda ekulungeleyo cacisa igama likayise, owazibulala entolongweni, etyholwa ngokugebenga angakwenzanga sisigwili awayesisebenzela ukuqhuba.
Ubomi obunzima bukaDiop bamenze isela elikrelekrele kakhulu, leyo, ixhaswe yi Itekhnoloji yenkulungwane yama-XNUMX, kumosha ubuchule kwiimpahla zabo kwaye modus operandi ukwenza oko ukuziphindezela ngokuchasene nendoda eyatshonisa uyise. Oku kwamnika ebuntwaneni bakhe inoveli yokuqala kaLupine kwaye uDiop oselula wayithatha njengesalathiso.
Ukuzonwabisa kakhulu, kubandakanya kuphela Izahluko ezi-5 ezo zibonwa ngoko nangoko. Kwaye zombini charisma ka-Omar Sy njengokufumana inqanaba EParis Okwangoku kunye noseto lweenoveli zikaLupin zibalulekile ukuze zikuthathele ingqalelo irhafu al Umntu ononcwadi.
Ezinye izihloko kunye neLupine
Ukucinga Umzukulwana kaLupin kunye neqela lakhe lamasela ngabona baphambili be Manga que Inkawu yenqindi, igama lesigaba se Kazuhiko KatoNdiyakholelwa ku 1967 kwaye sele i icon kwinkcubeko yaseJapan ngenxa yothando olukhulu lomlinganiswa okhoyo ngaphakathi EJapan. Apho iye yahlengahlengiswa kuthotho olwahlukeneyo, imidlalo yevidiyo kunye neemovie ze anime.
Ngokuchanekileyo namhlanje kuvulwa kwiscreen esikhulu Lupine III: Eyokuqala, entsha 3D oopopayi adventure ekhokelwa ngu Takashi yamazaki.
Ulwaphulo-mthetho lwaseFrance: i-anthology
Lo Ukuqokelelwa kwamabaliAbabhali abasusela kwinkulungwane ye-XNUMX abafikelela esiphelweni se-XNUMX, bakwabandakanya uLeblanc kunye noMérimée, IBalzac, Dumas, Maupassant, Apollinaire okanye uGaston Leroux, umyili we Iphantom ye-opera.
USherlock, uLupine, kunye nam: iBlack Lady Threesome
I-Lupine ikwavela kule ngqokelela ye iinoveli zolutsha, nguPierdomenico Baccalario noAlessandro Gatti, ekucingelwa ukuba ibhalwe ngu Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Irene. Kule nto, umbhali ukhumbula iihambo zobuntwana ukuba wayehlala nomcuphi kunye nenkwenkwe yaseFrance eyayithanda ukwabela into yangaphandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Lupine. Uthotho kunye neencwadi malunga nesela elidumileyo likaMaurice Leblanc
Inoveli engummangaliso kwaye uthotho lwempumelelo entle.
Iincwadi zeNoveli eziPhambili
Iincwadi ezithengisa kakhulu